१) शेयर बजार ४०० वर्ष भन्दा पुरानो हो |
स्टक बजारको विचार सन् १६०२ मा नेदरल्याण्ड्स मा सुरु भएको थियो। डच ईस्ट इण्डिया कम्पनीले कागज शेयर जारी गर्न थालेको थियो। शेयरधारकहरूले यी कागजी सेयरहरू बेच्न र किन्न सुरु गरे। यो कम्पनी शेयर बजार को पहिलो अवधारणा थियो। यसले सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेन्ज, एम्स्टर्डम स्टक एक्सचेन्जको सिर्जना गर्न नेतृत्व गर्यो। आज यो Euronext स्टक एक्सचेन्ज भनेर चिनिन्छ।
२) शेयर बजार कुनै पनि वर्ष ७०% ले बढ्ने सम्भावना छ |
कुनै पनि वर्षमा शेयर बजार तल जाने भन्दा बढि जाने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, पछिल्लो १०० वर्षहरूमा, डाउ जोन्स औद्योगिक औसत (DJIA) वर्षको ७०% माथि थियो र पछिल्लो ४० वर्षमा Standard & Poor’s 500 (S&P500) वर्षको ७७% माथि थियो। यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण भिन्नता हो।
यो केवल एक ऐतिहासिक तथ्याङ्क हो तर यो सय वर्षदेखि चल्दै आएको छ । यो जारी रहने राम्रो सम्भावना पनि छ।
यो नै एक कारण हो कि डलर लागत औसत (DCA) एक राम्रो विचार छैन। वास्तवमा, डीसीएले बजार तल जाने दावी गरिरहेको छ। तर सेयर बजारले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
३) अक्टोबर सबैभन्दा अस्थिर महिना हो |
सेयर बजारमा अक्टोबरको बारेमा मिथ नै छ। अक्टोबर प्रभाव नामक प्रभाव पनि छ।
अन्य महिनाको तुलनामा अक्टोबर महिनामा सेयर बजार बढी घट्ने गरेको मानिसको धारणा छ । अक्टोबरमा दुईवटा ठूला दुर्घटना भएका थिए। १९२९ को ग्रेट क्र्यास र १९८७ को क्र्यास दुबै अक्टोबर मा भएको थियो।
तर यदि हामीले लामो समयको तथ्याङ्कलाई लिने हो भने यो प्रभाव खास्सै महत्त्वपूर्ण छैन। अक्टोबरमा सुरु भएको भन्दा अक्टोबरमा धेरै बियरिस बजारहरू समाप्त हुँदै थिए। यो डाटाले यसलाई थप रोचक बनाउँछ। र यी दुई क्र्यासहरू धेरैजसो मानिसहरूलाई बेवास्ता गर्नका लागि पर्याप्त पुरानो छन्। यी बिन्दुहरूको कारणले गर्दा अक्टोबर प्रभावमा कम र कम मानिसहरू विश्वास गर्छन्।
तर, तथ्यांकअनुसार अक्टोबर महिना शेयर बजारमा सबैभन्दा अस्थिर महिना हो । अन्य महिनाको तुलनामा अक्टोबर महिनामा सेयर बजारमा धेरै उकालो लाग्ने गरेको छ । त्यसकारण, तपाइँ अक्टोबरमा केहि बलियो अस्थिरताको लागि तयार हुन आवश्यक छ।
४) सेप्टेम्बर सबैभन्दा खराब महिना हो |
हामीले भर्खरै देख्यौं कि धेरै मानिसहरू अक्टोबर प्रभावमा विश्वास गर्छन्। यही विचारमा सेप्टेम्बर महिना शेयर बजारको लागि सबैभन्दा खराब महिना हो।
औसतमा, १९५० देखि डाउ जोन्स औद्योगिक औसत (DJIA) मा ०.८% को गिरावट आएको छ। र सोही अवधिको लागि मानक र गरीबको ५०० सूचकांकमा ०.५% को गिरावट आएको छ। यो गिरावट अन्य सबै महिनाको तुलनामा निकै कम हो ।
५) संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व स्टक बजारको ४०% बनाउँछ
विश्व स्टक बजार विशाल छ, ६० वटा स्टक मार्केट एक्सचेन्जको साथ छ तर संयुक्त राज्यको शेयर बजार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो!
२०२२, जनवरीमा आउँदासम्म, अमेरिकी स्टक बजारले सम्पूर्ण विश्व स्टक बजारको ५९.९% ले प्रतिनिधित्व गर्दछ| यो दोस्रो देश जापान भन्दा निकै धेरै हो जसले विश्व शेयर बजारको ६.२% प्रतिनिधित्व गर्छ।
पाँच ठूला देशको स्टक बजार (जनवरी, २०२२ सम्म):
संयुक्त राज्य अमेरिका: ५९.९%
युनाइटेड किंगडम: ३.९%
६) एक व्यक्तिले अमेरिकी हाइड्रोजन बम बुझ्न स्टक बजार प्रयोग गरेका थिए |
हाइड्रोजन बमको सेयर बजारसँग के सम्बन्ध छ? धेरै होइन, तर तपाईले स्टक बजार मूल्याङ्कन हेरेर यसको बारेमा केहि चीजहरू भने फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
सन् १९५० को दशकमा अमेरिकाले हाइड्रोजन बम (वा थर्मोन्यूक्लियर बम) को अनुसन्धान गरिरहेको थियो। भौतिकशास्त्रीहरूलाई तिनीहरूले यसको लागि कुन इन्धन प्रयोग गरे भनेर खुलासा गर्न निषेध गरिएको थियो। तर धेरै मानिसहरु यसको बारेमा उत्सुक थिए।
अर्थशास्त्रका प्रोफेसर आर्मेन अल्चियनले पत्ता लगाए कि उनीहरूले इन्धनको रूपमा लिथियम प्रयोग गरेका रहेछन् भनेर। उनले परीक्षणको क्रममा लिथियम कर्पोरेशनको स्टक मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखे। यो कम्पनीले प्रयोगको प्राथमिक वर्षमा ४६१% को फिर्ती देख्यो |
आर्मेन अल्चियनले आफ्नो निष्कर्ष प्रकाशित गर्ने प्रयास गरे तर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सरकारले त्यसलाई निषेध गरेको थियो । धेरै पछि मात्र उनले यसलाई प्रकाशित गर्न सक्षम भए!